ပုဏ္ဏားကျွန်း ယိုးတရုတ်ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ် ဓားထိုးခံ...
1 ก.ย. 2562 - 17:12 น.
ဈေးဝယ်နေချိန်မှာ ဒုရဲအုပ်ကို ဓားနဲ့ ထိုးသတ်လိုက်တဲ့အတွက် ဈေးဝယ်နေကြတဲ့ ကျေးရွာသား တွေဟာ ကြောက်ရွံ့ထွက်ပြေးခဲ့ကြပြီး တစ်ရွာလုံး ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားခဲ့ကြောင်း၊ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် ခဲ့သူတွေကတော့ ထွက်ပြေးလွတ်မြာက်သွားခဲ့တာကြောင့် ဘယ်သူတွေဆိုတာကို မသိရရှိလိုက်ရကြောင်းသူက ပြောပါတယ်။
อัลบั้มภาพ ပုဏ္ဏားကျွန်း ယိုးတရုတ်ရဲစခန်းက ဒုရဲအုပ် ဓားထိုးခံရပြီးသေဆုံး